ကြီးကြီး၊ သေးသေး၊ လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် အချက် (၃) ချက် | မာသင်
ကြီးကြီး၊ သေးသေး၊ လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် အချက် (၃) ချက်
ဘယ်လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြီးကြီး သေးသေး လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် အောက်ပါ (၃) ချက်စလုံးလုပ်ပါ။
☑️Make it ဆိုတာ ရောင်းမယ့် ကုန်ပစ္စည်း ကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်တာ။
ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို ဖြစ်စေ ထုတ်လုပ်ဖန်တီးမှု ပေါ့။
ဖန်တီးလိုက်ရင် ပြီးသွားပြီလားဆိုတော့ မပြီးသေးဘူး။
☑️Sell it ဆိုတာ ရောင်းဖို့လုပ်ရသေးတယ်။
ထုတ်လိုက်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းက ရောင်းရမယ်၊မရောင်းရဘူးဆိုတာ မသိသေးဘူး။
သေချာတာကတော့ ရောင်းချခြင်းဆိုတာ သီးသန့်ကဏ္ဍ တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ထုတ်လုပ်တတ်တာနဲ့ရောင်းချတတ်တာ မတူဘူး။ ထုတ်လုပ်ဖန်တီးသူအမျာစုက ရောင်းချခြင်းမှာ အားနည်းလေ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် တော်တဲ့ကြိုးစားတဲ့ အရောင်းသမားအဖွဲ့ဆိုတာ အမြဲတမ်းလိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်လာတယ်။
ဈေးကွက်မှာ ဒီနှစ်ပိုင်း နဲ့ပဲ ဝင်လို့မရဘူး။ လုပ်ငန်းတော်တော်များများက ဒီနှစ်ပိုင်းနဲ့ပဲ ရပ်နေတတ်ကြတယ်။ ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ထုတ်လုပ်လိုက်တယ်။ အဲဒီထုတ်ကုန်ရောင်းရရင်ပြီးရောဆိုပြီး မျှောပြီး ရောင်းကြတယ်။
ရေရှည်မှာ ..ဒီ နှစ်ပိုင်းနဲ့ပဲ ဆိုရင်တော့ ဈေးနုန်းကို လာခိုက်တတ်တယ်။
တစ်ချိန်မှာ .. ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတူခြင်း ဈေးနုန်းယှဉ်ပြီး အပြိုင်လျော့ချရတော့မယ်။
ကိုယ်မလျော့ရင်လဲ .. သူ လျော့ချတဲ့အတွက် ကိုယ် အခက်တွေ့ရတတ်တယ်။
သူလျော့ ကိုယ်လျော့နဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြားမှာ ..
ဈေးနုန်းမလျော့ချင်ရင်… နံပါတ် (၃) ကို ဆက်လုပ်ရပါမယ်။
☑️Brand it .. ဘရန်းတစ်ခုဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားရမယ်။
ဘရန်းဆိုတာကလဲ သီးသန့်ကဏ္ဍ တစ်ခု ဖြစ်တယ်။
ဈေးကွက်ထဲမှာ ရောက်တာ ကြာတိုင်း ဘရန်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။
ကိုယ့်နောက်မှ ရောက်ပေမယ့် ဘရန်းဖြစ်လာတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေတစ်ပုံကြီး။
ကွာလတီကောင်းလို့ဆိုရင်လဲ ကွာလတီကောင်းပြီး ဘရန်းမဖြစ်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတစ်ပုံကြီး။
ဘရန်းဖြစ်ရင် ဈေးနုန်းပြိုင်ဆိုင်မှု လျော့လာတယ်။
ဘရန်းဖြစ်ရင် ဖောက်သည်လုစရာမလို ကိုယ့်ဖောက်သည်နဲ့ကိုယ်ဖြစ်လာတယ်။
ဘရန်းဖြစ်ရင် ရောင်းရလိုက်၊ မရောင်းရလိုက်မဖြစ်ပဲ အရောင်းတည်ငြိမ်လာတယ်။
ဒါကြောင့်.. ရောင်းယုံနဲ့မပြီး ဘရန်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
အဓိက ကဘယ်လိုလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ် (၃) ခုလုံးပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပါ။
(၁) ဖန်တီးထုတ်လုပ်ပါ။ (Make it )
(၂) အရောင်းအဖွဲ့ သီးသန့်ဖွဲ့ထားပါ။ (Sell it)
(၃) ဘရန်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။ (Brand it)
ဘရန်း အကြောင်း ပိုမိုသိလိုသူများ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘရန်းမားကက်တင်း စာအုပ် မှာ ဘရန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ နည်းလမ်းပေါင်း (၃၀) ဖော်ပြထားပါတယ်။
✔ ကိုယ်စိတ်အားထက်သန်တဲ့ အရာတွေကို မျှဝေပါ။ကိုယ်မျှဝေတာကို စိတ်အားထက်သန်တဲ့သူတွေရောက်လာလိမ့်မယ်။ ✔ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပြောပြလိုက်ပါ။ကိုယ်ပြောပြတာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့သူတွေရောက်လာလိမ့်မယ်။ ✔ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကို လုပ်ပြလိုက်ပါ။ကိုယ်လုပ်တာတွေကို...
မေးခွန်းလေး တစ်ခုလောက်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဖြေကြည့်ပါ။ နယ်ပယ် တစ်ခု ကို Professional ကျကျ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတာကောင်းလားဒါမှမဟုတ်နယ်ပယ် အားလုံး ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ် လုပ်တတ်အောင် ကြိုးစားတာကောင်းလား။" ဘဲ ဆိုတာ ..ပြေးတော့လဲ...
ကိုယ့် ကိုယ်ထဲမှာ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ရှိမရှိ စစ်ဆေးစမ်းသပ်နည်း အားလုံးသိပြီးသားပါ။ အင်္ဂလိပ်အခေါ် Vampire လို့ခေါ်တဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် ဆိုတာ သူတို့နဲ့တွေ့သမျှလူကို သွေးစုပ်ပြီး အားအင်ချိ့နဲ့စေတဲ့အကောင်ပေါ့။မြန်မာပြည်မှာ ခေါ်တာက ဖုတ်ဝင်တာပေါ့။ အညာမှာ ထန်းပင်ပေါ်က...
အတွေးလေးတစ်စ ပါ။အမှန်တော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘဝမှာ အလိုအပ်ဆုံးအရာဆိုတာ….စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွင်မှု မျိုးပါ။ အဲဒီအရာအတွက် တာဝန်အရှိဆုံးသူ ဟာလဲ ကိုယ်ပါပဲ။ " သင့်ဘဝရဲ့ပျော်ရွင်မှု အတွက်တာဝန်အရှိဆုံးသောဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူ့ကြောင့်၊ ဘာကြောင့်...
မာသင်@ စီးပွားရေး ဒဿနများ (၂ ) ဝန်ဆောင်မှုပြိုင်မလား (သို့) ဈေးနုန်းပြိုင်မလား ယနေ့နဲ့အနာဂတ်မှာ….Retail ဆိုတာ "ဝန်ဆောင်မှု" ချင်းပြိုင်တဲ့နေရာဖြစ်လိမ့်မယ်။"ဈေးနုန်း" ချင်းပြိုင်ဖို့တော့ Online...
သုံးလုံးမန္တန် "First, Fast, Focus !"၁။ First : ပထမဖြစ်ပါစေ။ ဈေးကွက်ထဲမဟုတ်ပါ။ စိတ်ကွက်ထဲကိုပါ။၂။Fast: ဝန်ဆောင်မှုအမြန်ဆုံး ဖြစ်ပါစေ။ ၃။ Focus: အရာအားလုံး ကောင်းမပြပါနဲ့။ အကောင်းဆုံး ကိုပဲပြပါ။...
အတူတကွ ရဲ့အား "မြန်မြန်သွားချင်ရင်၊ တစ်ဦးတည်းသွားပါ။ ဝေးဝေးသွားချင်ရင်တော့၊ မိတ်ဆွေများနှင့် အတူတကွ သွားပါ။ " "To go fast, go alone,To go far, go together" ( African Proverb ) သင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို...
နှလုံးသား(ခံစားမှု) ဖြင့်ဝယ်ယူသည်။ ==> စားသုံးသူ<==သင့်ဖောက်သည်တွေ က သင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှု ကို ခံစားမှုကြောင့်ဝယ်ယူသုံးစွဲပါတယ်။ ပြီးမှ ..ကောင်းလို့၊ မြန်လို့၊ အဆင်ပြေလို့..အစရှိသဖြင့် ကျိုးကြောင်းကျ အဖြေကို ဦးနှောက်ကထုတ်ပေးပါတယ်။ နှလုံးသား(ခံစားမှု)...
အကြွေး နဲ့ဒုတ် အသုံးပြုတတ်စေ။
အကြွေး နဲ့ဒုတ် အသုံးပြုတတ်စေ။ လုပ်ငန်းတိုင်း အကြွေးရှိကြသလို၊ အကြွေးတိုင်း မကောင်းဘူးလို့ပြောလို့မရပါ။လုပ်ငန်းကြီးလာသည်နှင့်အမျှ အကြွေးဆိုတာရှောင်လွဲလို့မရ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိကြပါတယ်။ ငွေချည်းသီးသန့်ချေးမှ အကြွေးမဟုတ်ပါ။ Consignment ဆိုတာအကြွေးပါပဲ။ Drop-Shipping...
စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင် စွန့် = စွန့်စား တာ ၊ စွန့်လွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဦး = ဦးဆောင်တာ၊ ဦးစီးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။တီထွင် = အသစ်တီထွင်ကြံဆခိုင်းတာ၊အစအဆုံး ဖန်တီးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။အင်္ဂလိပ်စကားလုံး သုံးလုံး ကို ပေါင်းထားတာ။Risk , Leadership, Innovation အဲဒီ ၃...
သို့ ညီငယ် ညီမငယ်များ……. များများ စားစား မတွေးပါနဲ့လေ။
သို့ ညီငယ် ညီမငယ်များ…….များများ စားစား မတွေးပါနဲ့လေ။တစ်ရက် ကို ၁% လေးပဲ တိုးတက်ပါစေ။တစ်နှစ်ပြည့်ရင် 365% ပဲမဟုတ်ဘူး။ထို့ထက်ပိုတဲ့ကြီးမားအံသြဖွယ်ရလဒ်။မယုံရင် English စကားပြောလေ့လာခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်။ခန္ခာကိုယ် ဝိတ်ချ နိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်။တစ်ရက်နည်းနည်း...
သင်သာမြေခွေးဆိုလျင် ဘယ်ပုံပြင်ကို ပိုကြိုက်သနည်း။ ပုံပြင် (၁)ဖျံနျှစ်ကောင် သည် ငါးကြင်းတစ်ကောင်ကို မိရာ သူ ရထိုက်သည် ငါရထိုက်သည် အငြင်းပွားကြသည်။ ထိုစဉ် မြေခွေး တစ်ကောင်ရောက်လာပြီး အငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းပေးလိုက်သည်။ဖြေရှင်းပုံမှာ ….ငါးအမြီးပိုင်း...
ဂုဏ်ယူခွင့် တွေ ပေးပါ။ ဝန်ထမ်းတွေ ကို အခွင့်အရေးတွေအစား ဂုဏ်ယူစရာတွေ ပေးပါ။“ငါဒီကုမ္မဏီမှာ လုပ်တာကွ” လို့ဂုဏ်ယူစွာ ပြောနိုင်အောင် သင့်ဝန်ထမ်းတွေကို ဂုဏ်ယူစရာများများ ပေးအပ်ပါ။✔️ကုမ္မဏီမှ အများအကျိုးပြု လမ်းတွင် အမှိုက်စုပေါင်းကောက်ကြသည်လား။ ဝန်ထမ်းတွေကို...
.မာသင်@စီးပွားရေးဒဿနများ (၁၁) လူမှုပညာ သင်ယူပါ။ ခေါင်းဆောင်မှု ဆိုတာ အတတ်ပညာကျွမ်းကျင်မှု မဟုတ်ဘူး။လူမှုပညာ ကျွမ်းကျင်မှု ဖြစ်တယ်။လူမှုပညာ ဆိုတာ မွေးရာပါ ကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူး။ဗီဇ နဲ့မဆိုင်ဘူး။လူမှုပညာ ဆိုတာ လေ့လာရတာ။ လေ့ကျင့်ရတာ။လေ့ကျင့်မှုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ဒါ့ကြောင့်...